नयाँ सरकारमा काँग्रेसबाट को को ?
काठमाडौं,१६ साउन । नयाँ सरकार गठन हुन अब केही दिन मात्र बाँकी रहँदा नेपाली काँग्रेसभित्र पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारमा जाने सांसदहरूको सूचीले लगभग अन्तिम रुप लिइसकेको बताइन्छ । नयाँ मन्त्री परिषदमा पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा समूहका महेन्द्र यादव, जीवन बहादुर शाही, डिना उपाध्याय , अर्जुन जोशी, मीन बहादुर विश्वकर्मा, बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल […]
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन म असफल भएँ –बामदेव गौतम
काठमाडौं ,१६ साउन । एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफू असफल भएको बताएका छन्। पुष्पलाल अध्ययन समाजद्वारा शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताए। नेता गौतमले कसका कारण असफल भए उक्त कुरा खुलाएनन्। वैशाख २३ गते एमाले र एमाओवादीको सहकार्य तोडिन लाग्दा आफूहरूले नै जोडेको र त्यसैबेला […]
मधेशी मोर्चा आफ्ना माग पुरा भए सरकारमा जाने
काठमाडौं,१५ साउन । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आफूले उठाएका प्रमुख मागमा नयाँ सत्ता गठबनधन दल प्रष्ट भए मात्र सरकारमा सहभागी हुन सक्ने स्पष्ट पारेको छ। शुक्रबार बसेको मोर्चाको बैठकले अब बन्ने सरकारलाई सहयोग गर्न पहलिे कांग्रेस–माओवादी प्रस्ट हुनु पर्ने सर्त अघि सारेको छ। कांग्रेस माओवादी गठबन्धनले मधेसलगायत समस्या समाधानमा गम्भीरता देखाए अब बन्ने सरकारको पक्षमा […]
काम चलाऊ प्रधानमन्त्री ओलीको भारत बिरुद्ध कडा आक्रोश
काठमाडौं,१३ साउन । काम चलाऊ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार परिवर्तन गरेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने सपना नदेख्न दक्षिणी छिमेकी भारतलाई चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार सयौं स्रष्टाहरुकासामु आफूले राजीनामा दिएपछि नेपाल भित्रभन्दा वाहिर बढी खुशीयाली छाएको भन्दै खुशी मनाउने क्रममा अब आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने भो भनेर नरमाउन भारतलाई चेतावनी दिए । […]
एउटै पार्टीका दुई अध्यक्ष
काठमाडौं, ११ साउन । दुई समूहमा विभाजित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अब एकीकरण हुँदा पनि दुई अध्यक्ष नै रहने भएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालबीच एकीकरण भएपछि एकीकृत पार्टीको नाम ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी’ हुनेछ । साथै सो पार्टीको राष्ट्रिय अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा र कार्यकारी अध्यक्ष कमल थापा हुने गरी […]
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा नलिने
काठमाडौं,११ साउन । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिनकै लागि विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा नलिने भएका छन् । गच्छदार नेतृत्वको पार्टीलाई सरकारमा ल्याउँदा मधेसी मोर्चा भड्किन सक्ने भएकाले कांग्रेस–माओवादीले राप्रपा र केही साना दललाई मात्र समेटेर सरकार निर्माण गर्ने गृहकार्य थालेका हुन् । फोरम लोकतान्त्रिकले अन्तिम घडीमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार […]
यस्तो छ कांग्रेस माओवादीबीच मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने सहमति
काठमाडौं, १० साउन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदबाट राजीनामा दिई मार्गप्रशस्त गरेलगत्तै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा उभिएका राजनीतिक दलहरुलाई समेटेर सरकार बनाउने कसरत थालेका छन् । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नयाँ गठबन्धनका प्रस्तावित प्रधानमन्त्री माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सहमतीय सरकारका लागि पहल थाल्न जिम्मेवारी दिएका छन् । नयाँ बन्ने दाहाल नेतृत्वको सरकारमा […]
अविश्वास प्रस्तावको पक्षतिर ‘३७०’ सांसद,
काठमाडौं, ९ साउन । व्यवस्थापिका संसदको भारी बहुमतले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित केपी शर्मा ओलीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पनि भारी बहुमतले पारित हुने देखिँदै छ । सत्तासाझेदार मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका दलले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय शनिवार गरेपछि ओलीको विपक्षमा पल्लाभारी बन्दै गएको हो। अविश्वास प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ र निर्णयार्थ मतदान आइतबार हुँदैछ। नेपाली […]
राप्रपाका २ जना मन्त्रीले छाडे ओली सरकार
काठमाडौं ८ साउन । लोकेन्द्र बहादुर चन्द नेतृत्वको राप्रपाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । राप्रपाको पार्टी कार्यालय चावहिलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले ओली सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको सहप्रवक्ता किरण गिरीले जानकारी दिए । बैठकले पार्टीले तर्फबाट सरकारमा सहभागि दुई मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउने […]
ओलीबिरुद्ध एमालेमै मोर्चाबन्दी , मोर्चाबन्दीमा को को भए सक्रिय ?
काठमाडौं, ७ साउन । वाम गठबन्धन टुटाउने योजनाको प्रमुख मतियार नै खड्ग ओली भएको भन्दै नेकपा (एमाले) भित्र माधव नेपालको नेतृत्वमा झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, योगेश भट्टराई, घनश्याम ढकाल, युवराज ज्ञवालीलगायतका नेताहरुले मोर्चाबन्दी सुरु गरेका छन् । वामगठबन्धन टुटाएर प्रतिक्रियावादीको गोटी बनेको, विगतका सहमति तथा सम्झौता तोडेको, कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तयार नभएको भन्दै […]